Khiyaamada Fall Guys, Liiska ugu Fiican (XALAY)
Inicio/Hacking/Khiyaamada Fall Guys, Liiska ugu Fiican (XALAY)
0 6.510 5 daqiiqo akhri
Haddii aad raadineysay tan ugu fiican hacks ragga dhicitaanka Waxaad timid meeshii saxda ahayd, in kastoo kahor intaadan bilaabin maqaalka, aan xasuusanno wixii caadiga ahaa.
Maqaalkan waxaa loo qoray adeegsiga tacliimeed oo keliya iyo si loo muujiyo amni-darrada ku hareeraysan internetka xitaa cayaaraha fayraska ugu badan.
Waa in la ogaadaa in Fall Guys uu aad u guuleystey. Si kastaba ha noqotee, tan darteed iyo ku takrifalka ciyaarta ee isticmaalayaasha isticmaala hackwaa inay shaqaaleeyaan adeegga Easy Anti-Khiyaano. Haa, isla khiyaanada Anti loo isticmaalo by kulan sida weyn sida Fortnite. Marka ma sahlana in la isticmaalo badanaa badiyaa iyada oo aan qatar la gelin.
Hadaad rabto inaad tijaabiso Hack ku samee halistaada. Waa inaad maskaxda ku haysaa isticmaalka qalabkan caqabad ku ah raaxeysiga isticmaaleyaasha kale tanina waxay sababi kartaa Mamnuuc deg deg ah haddii ay ogaadaan inaad isticmaaleyso. Iyadoo aan dib loo dhigin. Waxaan ku bilaabaynaa UGU FIICAN HACKS FOR GUYS GUYS!
Marka xigta hack Waxaa loo yaqaan 'Engine Engine', waxay noo oggolaan doontaa inaan wax ka beddelno taxane ah shaqooyinka ciyaarta si aan u jeclaanno.
1 ENGINE QIYAANE HACK EE GUYS GUYS
1.1 Kuwani waa qaar ka mid ah cayaaraha kombiyuutarka bilaashka ah ee laga yaabo inaad xiiseyneyso:
1.2 Shaqooyin noocee ah ayaan wax ka beddeli karaa iyo waajibaadkee?
1.3 Hack xawaaraha Fall Guys
1.4 Quusin badan
1.5 Maya Cufis / Super Jump in Guall Guys
1.6 Fall Force
1.7 Majiraan ama garaacid
1.8 Iska ilaali shilalka
1.9 La dagaallama fursadaha markaad wax qabsato
1.10 Wax ka beddel Radius si aad u qabato
1.11 Wax ka beddel Fogaanta Hubinta Fogeynta
1.12 Wax ka beddel Xoogga Qabashada
1.13 Wax ka beddel Waqtiga Nasashada
1.14 Super ayaa ku dhegan Guall Day
1.15 Hack Inaad Haan ku ahaato ragga dhacaya
2 Hack laga soo bilaabo Fall guys number 2: Khiyaano FG interface-ka gudaha:
2.1 UU ISTICMAALO AMA SIDA LOO ISTICMAALO:
2.4.1 Qaabka Duulista - F1
2.4.2 Hack xawaare - F2
2.4.3 Quusitaanka Kordhinta - F3
2.4.4 Wax ka beddelka darnaanta - F4
2.5.1 SOO DHAWR AMA SOO qaado
2.5.2 Waxyaabaha Dhibcaha Sheyga - F10
2.5.3 Fursad loo siman yahay markii la qabto - F11
2.6.1 Qabashada Super -F12
3 QAADO LINKS iyo macluumaad dheeri ah oo lagu rakibo hacks dhac Guys.
4 Saddexaad iyo kii ugu dambeeyay ee Hacks loogu talagalay Guall Fall.
4.1.1 Ku guuleysta Tartanka:
4.1.2 Xayiraadda booska:
4.1.3 Heer caawiye:
5 Khasaaraha suurtagalka ah ee tan Hack.
6 Cheats dheeraad ah oo aan rakibo:
7 QIYAAMO SI AAD U OGAATO Albaabka Dhabta ah
8 KHIYAAMADII SHORTCUT EE GUYS DHACAY (Tilmaam Buuxda)
8.1 Waan jeclahay tan:
ENGINE QIYAANE HACK EE GUYS GUYS
Khiyaamadan si fiican ayaa loo yaqaan maadaama ay waxtar u leedahay ciyaaro badan, Khiyaanada Engine waxay leedahay taariikh dheer. Waa mid ka mid ah kuwa ugu kalsoonida badan, dareenka leh oo sahlan in la barto isticmaalka. In kasta oo aysan ku siinaynin wax kasta oo la qabtay. Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysan doonto tan hack ragga dhicitaanka.
(Xiriirimaha soo degsashada ayaa ka hooseeya, haddii aad rabto inaad si toos ah u abaarto barta.)
Gali Fall guys ka STEAM.
Bilaw Khiyaanada Mashiinka 7.1 oo fur jadwalka waxyaabaha ku qoran sawirka.
Ka dib ku dheji habka ciyaarta ciyaarta Guall Guall: FallGuys_client.exe.
Diyaar, waa inaad ku biirtaa ciyaar oo aad wax ka beddeshaa qiyamka khiyaamada.
Kuwani waa qaar ka mid ah cayaaraha kombiyuutarka bilaashka ah ee laga yaabo inaad xiiseyneyso:
Sidee loo ciyaaraa Dhimashada Socodka: Wadada Badbaadada?
Sidee loogu ciyaaraa Evertale kombiyuutarka?
Soo Degso oo Ciyaar Dagaal Markab Dagaal: Boqortooyadii Naval
Ciyaar Boqorka Avalon: Dominion
Shaqooyin noocee ah ayaan wax ka beddeli karaa iyo waajibaadkee?
Hack ee xawaaraha Goobaha Guud
- caadiMaxSpeed (Adiga uun, waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax ka beddesho xawaarahaaga ugu sarreeya ee caadiga ah)
- wareejintaMaxSpeed (Kuu ogolaanayaa inaad xawaaraha kubbadda ku beddesho)
- sideMaxSpeed (Kuu ogolaanayaa inaad xawaaraha ukunta ku bedesho)
- qabsashadaMaxSpeed (Ciyaartoyda kale)
- quusin (Ku habboon Dhulka)
- airDiveForce (Ku habboon markaad hawada u booddo)
No Cuf / Jump Super Guall Guys
(Kuu ogolaanayaa inaad wax ka beddesho cuf isjiidadka si aad u samayso boodboodyo super ama ka soo horjeedka ah.)
- Miisaanka cufnaanta (Qiyaasta darnaanta)
Majiraan ama garaacid
- firfircoonCollisionStunForce = 0
Iska ilaali shilalka
- isku dhacaPlayerToPlayerUnpinMultiplier = 0
- dhicidOverAngle = 0
La Dagaallama Fursadaha markaad wax qabato
- qaadoAlwaysLoseTussleWhenGrabbed = 0
Wax ka beddel Radius si aad u qabato
- playerGrabDetectRadius (qiimaha ugu badan)
Wax ka beddel Fogaanta Hubinta Fogeynta
- playerGrabCheckDistance (qiimaha ugu badan)
Wax ka beddel Xoogga Qabashada
- grabMaxForce (qiimaha ugu badan)
Wax ka beddel Waqtiga Nasashada
- playerGrabBreakTime (qiimaha ugu badan)
- playerGrabBreakTimeJumpInfluence (qiimaha ugu badan)
Super ayaa ku dhegan Guall Day
Hack Inaad Haan ku ahaato ragga dhacaya
MUHIIM: Qiimaha mashiinka qishka ayaa la soo bandhigi doonaa ka dib marka aad gasho ciyaar.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso: Ugu fiican Hacks loogu talagalay Dhexdeenna
Hack laga bilaabo Fall guys lambarka 2: Khiyaamee FG interface-ka gudaha:
UU ISTICMAALO AMA SIDA LOO ISTICMAALO:
Gali Gu'ga Dayrta ee 'STEAM'.
Fur Mashruuca Khiyaamada oo ku dur guDayaanna c sidaan kor kusoo sharaxnay.
Taabo INSTERT si aad u furto liiska oo aad u isticmaali karto Qiyaanada
Xusuusnow inaadan xirin daaqada qishka
BILAASH(Guri) - Qari qoraalka geeska
Tirtir (TIRSAN) - Furaha argagaxa (isla markiiba wuxuu xiraa ciyaarta)
balan kalluun (DHAMMAAD) »barkinta Hack de fall guys (dami khiyaanada laakiin ciyaarta sii fur. Dami qiimayaasha wax laga beddelay.)
F5 - Albaabbada Royal (albaabka degdega ah)
F6 - Camino dhabta ah (Suulka Suulka)
F7 - Ciyaartoy aan Jin ahayn
F8 - Dhammaan dhufto ee muuqda (Fall Match / Fruits Match)
F9 - Ciyaaryahan dabada leh (final)
Qaabka Duulista - F1
Hack xawaare - F2
Dhaqdhaqaaqa Dabeecadda (Ugu talagal ahaan 9.5)
Markaad shay kasta shubato (Ugu talagal 8)
Qabsasho ama Xawaare Caadi ah (Default at 5)
Quusitaanka Kordhinta - F3
Kordhinta Caadiga ah ee Caadiga ah (Ugu talagal 16.5)
On hawada (Default waa 7)
Wax ka beddelka darnaanta - F4
Qiyaasta darnaanta (ugu talagal at 1.5)
Jooji Is-Waxyeellooyinka iyo Joojinta
Jooji isku dhaca walxaha
Disable Player vs Shil Ciyaaryahan
SOO DHAWR AMA SOO qaado
Waxyaabaha Dhibcaha Sheyga - F10
Shayga Caadiga ah (Udiyaar ahaan 50)
Shayga Quusitaanka Shayga (Ugu talagal 90)
Fursad loo siman yahay markii la qabto - F11
Qabashada Super -F12
Radius xajin (Default at 6)
Fogaanta Qabashada (Ugu Horaynta 2)
Awoodda ugu Badan ee Qabashada (Ugu-sarreysa 0.6)
Caadi ah (Ugu talagal at 1.2)
Boodbood (Default at 0.01)
Dhererka Gacanta (Ugu talagal 1)
Hubinta Saldhigga Saadaalinta Saldhigga (Ugu-sarreynta 0.1)
Hoosudhaca Xawaaraha Xajin Degdeg ah (Default 0.5)
Qabso Qabow (Coldown) (Default 0.5)
Dib-u-qabashada Dib-u-dhigga (Default 2)
Xaglo si aad u jebiso xajin (Default 75)
Xoog Kala Qaadista (Default 7)
Xawaare xajin (Default 0.01)
XIRIIR LACAG LA'AAN iyo macluumaad dheeri ah oo lagu rakibo hacks dhac Guys.
Mashiinka Khiyaanada: https://www.unknowncheats.me/forum/d…=file&id=30678
Khiyaanada Gudaha (kaliya loogu talagalay 64bit):https://www.unknowncheats.me/forum/d…=file&id=30679
Haddii aad dhibaato ku qabtid Cirbadda Khiyaanada
NET Qaab dhismeedka 4.8:https://dotnet.microsoft.com/downloa…ramework/net48
Microsoft Visual C ++ 2015-2019 Dib-u-qaybin:https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe
Waxaan rajeyneynaa in kuwani ay adiga waxtar kuu leeyihiin Hacks for Fall Guys, haddii aad dhibaato ku qabto rakibidda ama fahamka hacks waad booqan kartaa ilaha laga helo. Waxaad ka heli doontaa iyaga isla iskuxirayaasha 'Download'.
Saddexaad iyo kii ugu dambeeyay ee Hacks loogu talagalay Guall Fall.
Ok kan hack Uma dhammaystirna sida kuwa kor ku xusan, waxay kaloo u baahan tahay aqoon heer dhexe ah. Laakiin waxay la mid noqon doontaa ama ka waxtar badan tahay kuwii hore.
Midkoodna hacks waxay hubin karaan inaadan lagaa mamnuucin, maanka ku hay in isticmaalkooda ay saameyn ku yeelanayso tayada ciyaarta isla markaana ay marwalba ka hor imaaneyso inaad yeelato khibrad ciyaareed wanaagsan. Tani waxay ka dhigan tahay in hal abuureyaashu ay si joogto ah ugu jiraan dagaalka si ay u horumariyaan khiyaanooyinkooda ka dhanka ah. U adeegso iyaga ikhtiyaarkaaga ah.
Ku guuleysta Tartanka:
(Ku guuleysta tartanka) Waxaan kuu soo diri doonaa khadka dhammaadka
Este hack Lagugula talinayo inaad isticmaasho, marka lagu daro carqaladda ciyaarta, had iyo jeer maahan wax xiiso leh inaad guuleysato.
Ku guuleysta tartanka hacks loogu talagalay ragga Fall
(Qabooji Booska) Qabooji booskaaga si aad uga ilaaliso naftaada inaad dhacdo.
Isla markiiba tirtir albaabada beenta ah si aad uga gudubto. (Adiga iyo dhamaan ciyaartoyda)
Khasaaraha suurtagalka ah ee tan Hack.
Mararka qaarkood way dhacdaa marka aad isku daydo inaad ku durto ciyaarta.
Hirgelinta waxay u baahan tahay DLL badan, ma jiro hal feyl oo la fulin karo, waxayna carqaladeyneysaa rakibidda.
Degso xiriiriyaha, macluumaad dheeri ah iyo dhibco.
Cheats dheeraad ah oo aan rakibo:
Waxaan fahamsanahay inay ku adag tahay celceliska isticmaalaha inuu isticmaalo taxanahan aaladaha, xitaa had iyo jeer had iyo jeer waxaa jira xulashooyin badan waxaana macquul ah in la helo xeelado si aad ugu guuleysato ciyaarta adigoon isticmaalin hacks dibedda, si fudud u fahamka sida ciyaarta u shaqeyso. Sababtaas awgeed, haddii aad ka mid tahay isticmaaleyaasha dhibaatooyinka la kulma hackhaa, madhnaan maysid Waa tan sida hackdheg dhicis guys fudeyd la'aan hacks.
QIYAAMO SI AAD U OGAATO Albaabka Dhabta ah
KHIYAAMADII SHORTCUT EE GUYS DHACAY (Tilmaam Buuxda)
ce fall guys khiyaamee mishiinka dhicitaanka ragga khiyaamo dhicitaanka ragga sida hackdheg dhicis wiilal sida loo isticmaalo hack dhiciya rag sida loo duulo dayrta guys download hack dhiciya rag dhiciya rag ce dhicitaanka ragga khiyaameeya dhiciya rag FG hack dhiciya rag duuli hack dhiciya rag hack dhiciya rag hack free dhiciya rag hack cufnaanta dhiciya rag hackeado dhicitaanka ragga xawaare hack guul guul guys fudud hack by taang dhicis guys hack xawaaraha dhicitaanka ragga hack dhiciya rag hack gabdho dhacsan download hack dhiciya rag maya doorashooyin hack dhiciya ragga adigoon bixin hack dhicitaanka ragga xayeysiis bilaash ah hack FG dhicitaanka ragga hack free dhicitaanka ragga hackdheg dhicis wiilal hackdheg dhicis wiilal fudud hackdheg dhicis wiilal lama bixin hackdheg dhicis guys majirto barnaamijyo hacks ragga dhicitaanka keroro khiyaano dhac guys ugu fiican hacks dhicida ragga hab duulimaad day guys mods dhici guys Ser hacker dayrta guys Ser hacker dhici guys qabashada super guys duuli dhicitaanka ragga
Sida loo soo cesho lambarka sirta ah ee 'Instagram' adoo adeegsanaya "halmaamay lambarkaaga sirta ah"
WordPress plugins, maxay u yihiin iyo maxay yihiin noocyadooda?